धरानमा पछिल्लो समय एघार दिनको अन्तरालमा २२ जनामा डेंगु संक्रमण भएको पाईएको छ । सबै भन्दा बढी धरान–१५ मा १९ जना र धरान–१३ मा २ जना त्यसैगरी धरान–९ मा १ जनामा गरी जम्मा २२ जनामा डेंगु संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । तर धरानको डेंगु नियन्त्रणका लागि भने धरान उपमहानगरपालिकाबाट प्रभावकारी काम नगरेको जनगुनासो छ । सबैभन्दा पहिले धरान–१५ मा डेंगु देखिएको थियो ।
त्यही क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिले धुवा लगाउने फगिङ गर्न सुरु गरिएको थियो । तीन जनामा डेंगु देखिँदादेखि सुरु भएको फगिङ गर्ने कार्य अझै धरान–१५ मा २२ जना पुग्दासम्म पनि पुरै सकिएको छैन । यसले गर्दा धरानमा अरु तिर पनि डेंगु फैलिइसकेको छ । तर नियन्त्रणको प्रयास भने एकै ठाउँमात्रै भईरहेको छ । यसले गर्दा अरु तिर डेंगु संक्रमण बढ्दै गईरहेको छ । धुवा लगाउने बाहेक धरान उपमहानगरपालिकाले अरु नियन्त्रणको प्रयास पटक्कै गरेको देखिदैन । यसले गर्दा धरानमा फैलिएको डेंगुलाई नियन्त्रण गर्न धरान उपमहानगरपालिकाले खासै गम्भिर रुपमा लिएको देखिँदैन । विश्वका विभिन्न देशहरुमा डेंगुको माहामारी रुप देखिएको विदितै भएर पनि धरान उपमहानगरपालिका किन डेंगु नियन्त्रणमा सक्रिय हुन सकेन ? खाली धुवा उडाउँदैमा डेंगु नियन्त्रण हुन्छ त ? यदी होईन भने धरानमा डेंगु नियन्त्रणका लागि अरु पहल कदमी पनि गर्न अत्यन्तै जरुरी भएको छ ।
यदी धरान उपमहानगरपालिकाले यसको नियन्त्रणमा पहल नगर्ने हो भने र गम्भिर नहुने हो भने धरानबासी आफै सक्रिय भएर डेंगु रोग नियन्त्रणका लागि लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । धरान जस्तो सफा नगरीमा यसरी डेंगु फैलिनु कम चानचुने कुरो होईन । यस्तो ठाउँमा त यसरी डेंगु रोगको संक्रमण दिनानुदिन बढ्नु भनेको अरु ठाउँमा कस्तो होला ? अनि गर्मिको सुरुवातमा देखिएको यो डेंगु रोगको संक्रमण पछि अझ धेरै गर्मि बढ्दा डेंगुको प्रकोप अझ बढ्ने चिकित्सकहरुको भनाई छ । यसकारण डेंगु नियन्त्रणमा धरान उपमहानगरपालिकाले धुवा उडाएर धरान उपमहानगरपालिकाको पैसा धुवामा नउडाई नियन्त्रणको विषेश पहल कदमी गर्नुपर्छ । त्यसैले डेंगु नियन्त्रण धुवा उडाएर मात्रै होईन प्रभावकारी हुनुप¥यो । चाडै धरानबाट डेंगुको उन्मुलन हुने खालको कार्यक्रमहरु लिएर अभियानमा धरान उपमहानगरपालिका लाग्नुपर्छ ।